Viewforth Dog Friendly Property - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguHilary
I-Viewforth yindlu evaliweyo, eyayisakuba yi-croft cottage eyakhiwa ngo-1912. Ngemini enelanga okanye ekutshoneni kwelanga kunzima kakhulu ukuzikhupha kwiifestile phambi kwendlu ukubukela ukukhanya kutshintsha umbono. Indlu ineegadi ezivaliweyo ngokupheleleyo (ubungqina be-cocker spaniel) ingasemva yegadi kwaye igadi ngaphambili ineembono ezintle kuyo yonke indawo.
Ungena endlwini ngeveranda engaphambili enendawo yempahla yangaphandle nezihlangu. Ipaseji ikhokelela kwigumbi lokuhlala ngasekhohlo kunye negumbi lokutyela elahlukileyo ngasekunene. Omabini amagumbi azaliswe kukukhanya kwaye akhululekile. Igumbi lokuhlala lineesofa ezimbini zesikhumba, i-tv eneziteshi zokujonga simahla kunye noluhlu lweencwadi kunye neemephu onokuthi uzisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho. Igumbi lokutyela linetafile enkulu eyenziwe ngamaplanga enezihlalo ezintandathu. Ikhitshi ifikeleleka ngegumbi lokuhlala kwaye ibaleka ngasemva kwendlu. Ineendawo ezininzi zekhabhathi kwaye ixhotyiselwe ukupheka ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho umpheki one hob yombane, umatshini wokuhlamba izitya, isikhenkcisi sefriji, i-tumble drier kunye ne-microwave. Igumbi lokuhlambela elidibeneyo liphakathi kwegumbi lokuhlala kunye nekhitshi phantsi kwezinyuko. Ineshawa enkulu kwaye yahlaziywa ehlotyeni ngo-2019. Phezulu kukho igumbi elineebhedi ezimbini kunye negumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu. Omabini amagumbi okulala aneewodrophu ezinkulu ezifakelweyo ezinendawo eninzi yokugcina, eyaneleyo nakwabo bangakuthandiyo ukuhamba ukukhanya! Indlu ifudunyezwa ngokufudumeza okuphakathi kwe-oyile kwaye ipholile kakhulu. Sisanda kuseka i-router ye-4G ukubonelela nge-WiFi ngexesha lokuhlala kwakho. Iphakheji ibonelela ngedatha engenamkhawulo. Ukuba ukuhlala kwakho kuphakathi kwenyanga ka-Okthobha no-Epreli singakucela ukuba unikele kwiindleko zedatha ukuba nguwe kuphela iindwendwe ezihlala kuloo nyanga kwaye ufuna i-WiFi. Ukuba wonwabile ukuhamba ngaphandle koko kulungile.
Imboniselo ikwindawo esemaphandleni ye-Isle of Lewis ebizwa ngokuba yiCarloway. Indlu ibekwe kufutshane nendlela ekhokelela eGearrannan Blackhouse Village. Kukuqhuba ngaphantsi kwemizuzu ye-5 kwaye ichazwa ngokuthi "imyuziyam ephilayo" yeendwendwe ezibonisa ubomi kwindlu emnyama yaseScotland. Ukuqhuba kwemizuzu engaphantsi kwe-15 kuya kukusa kwiCallanish Standing Stones. Iindlela ezintathu zithatha ukusuka eCarloway ukuya kwidolophu enkulu yaseStornoway, zonke zibukeka kakhulu kwaye zikuvumela ukuba ubone iindawo ezahlukeneyo zesiqithi kwaye zonke zihamba malunga nemizuzu engama-30-35. Kukho iilwandle ezimbini ngaphakathi kwemizuzu emi-5 yokuqhuba indlu. IDalmore yeyona ikufutshane kwaye inkulu. I-Dalbeg ikude kakhulu endleleni kwaye ikwanika ithuba lokuhamba kwi-croft ejikeleze unxweme. Zombini iilwandle zinesanti kwaye zihlala zinamaza aqengqelekayo ukusuka eAtlantiki. Zombini ziphawulwe kwindlela enkulu ephumela eBragar. I-Viewforth ikwindawo eqaqambileyo yokuphonononga sonke iSiqithi kuba sidityaniswe kakuhle nendlela. I-Ness emantla esiqithi imalunga neekhilomitha ezingama-25 kwaye indawo yase-Uig yimizuzu engama-30 yokuqhuba nomvuzo wolwandle olumangalisayo ekugqibeleni. Iindawo ezingaphaya kweStornoway zikufanele ukutyelelwa nazo. I-Tarbert, eyona lali iphambili eHarris inokufikelelwa ngokulula kwisithuba esingaphezulu kweyure ngendlela kwaye luhambo oluhle kakhulu.
Nceda uqaphele ukuba ukujikeleza iziqithi ngaphandle kwemoto kunokuba lucelomngeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Hilary
Mna nomyeni wam sihlala kwaye sisebenza kwi-Scottish Borders xa singekho kwiholide eCarloway. Ngelishwa asiyi kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho kodwa ngethamsanqa umgcini uhlala ecaleni kwendlela kwaye unokunceda ngayo nayiphi na imiba. Zonke iinkcukacha zoqhagamshelwano ziya kubonelelwa kamsinya nje emva kokubhukisha.
Mna nomyeni wam sihlala kwaye sisebenza kwi-Scottish Borders xa singekho kwiholide eCarloway. Ngelishwa asiyi kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho kodwa ngethamsanqa umgcini uhlala…